UKylie Jenner wabonisa iqoqo lakhe elikhulu lezikhwama futhi watshela ngamakhilogremu
Ngemuva kokuba uKylie Jenner oneminyaka engu-20 ubudala abe ngumama, waqala ukuvela ekuxhumaneni nomphakathi nasemiphakathini yomphakathi. Ubufakazi obulandelayo balokhu yizithombe emakhasini akhe ku-Instagram naku-Twitter. Iningi lwakamuva, uKylie wabelane ngesithombe sakhe nendodakazi yakhe esanda kuzalwa, etshela ukuthi isibalo sakhe sashintsha kanjani ngesikhathi sokukhulelwa, futhi namhlanje wabonisa ukuqoqwa kwezikhwama zakhe, ezithandayo.
UJenner wabuyiselwa ngo-18 kg
Labo abalandeli abalandela impilo kaKylie bayazi ukuthi ngesikhathi sokukhulelwa intombazane yayifihlile yonke into ephuma e-paparazzi, ayizange igcine amakhasi okuxhumana nabantu futhi angayi emaphathini. Kodwa-ke, ukuzalwa kwakhe kwambuyisela endleleni evamile yokuphila futhi izolo uJenner wabelane nabalandeli bakhe isithombe sendodakazi esanda kuzalwa, etshela ngokukhulelwa kwakhe. Okokuqala, ingxoxo yayithinta izinguquko esithombeni, ngoba, njengoba nje omusha eshoyo, uphinde wabuyiselwa ngo-18 kg. Ngemuva kokuba uKayli evule, abafuna ukuzizwa kabi bamgcwalisa ngokusho ukuthi isisindo ngemuva kokuzalwa ngokushesha futhi uJenner wasungula okuningi kubalandeli abazange balahlekelwe yithakazelo kuyo. Ebona lokhu kusabela, umama-bhizinisi oneminyaka engu-20 wanquma ukuthi ukuphikisana ngalesi sihloko akusizi ngalutho futhi usule umyalezo wakhe.
UKylie Jenner nendodakazi yakhe
Khumbula, uKylie usevele unikeze izingxoxo eziningana, lapho ekhumbula ukukhulelwa kwakhe. Ngakho, isibonelo, kuye ubulili bomntwana kwakumangalisa. Yilokho amazwi mayelana nalokhu Jenner athi:
"Mina noScott sasiqiniseka ukuthi siyoba nendodana, kodwa sasinendodakazi enhle. Kwamangala ngempela, okwaba yinjabulo engakaze ibe khona. "
Ngaphezu kwalokho, enkulumweni uKylie wathi akufanele ukwesaba ukubeletha:
"Ngiyazi ukuthi amantombazane amaningi amancane asaba ukuzala. Ngangiphinde ngibe nombolo yabo, kuze kube yilapho ngizikholelwa ukuthi lokhu kuyinqubo yemvelo ukuthi bonke abesifazane kulo mhlaba baphumelela. Ngahamba ngomoya omuhle wokubeletha futhi manje nginesiqiniseko sokuthi kuphela ngalezi zengqondo kufanele umuntu athole lesi simo. "
Umlindi wamaphoyisa uKylie Jenner wasitshela ukuthi akayena ubaba kaStormi
Kylie, usizo! U-Rapper u-Taiga angaphuma ejele ngokuhluleka ukukhokha intela
Ukuqoqwa kwezikhwama nguKylie Jenner
Phakathi naleso sikhathi, abalandeli abaningi baxoxa ngokulahlekelwa isisindo somuntu odumile wesifazane, kanti abanye bajabulela ukubuka abanye abasebenzi abathandekayo. Ngolunye usuku, uKylie wabelane nabalandeli bakhe izithombe kusukela egumbini lokugqoka, lapho egcina amasaka. Ngisho nangomqondo wabachwepheshe bezemfashini abanolwazi kanye nalabo abangacabangi ukuphila kwabo ngaphandle kwezinto ezintsha ezenziwe ngemfashini, uJenner wamangala kakhulu.
UKylie Jenner enezikhwama
Isithombe sibonise ukuthi uKylie ubhekana kanjani nomphumela weqoqo elikhulu lemikhiqizo evela emikhakheni ehlukahlukene yomhlaba wonke. Phakathi kwemiboniso eqoqweni ungathola izikhwama ezivela ezindlini ezinjalo njengeHermes, Chanel, Dior, Gucci, Balenciaga nabanye abaningi. Uma sikhuluma ngamamodeli, uKylie uyathanda imikhiqizo ngesitayela se "Birkin", ngoba eqoqweni lakhe kukhona eziningi zazo. Ngendlela, yizibonelo, eziza neHermes brand, ayikho imali engenamsebenzi. Intengo yabo iqala kusuka kuma-dollar ayizinkulungwane ezingu-16 futhi iphela nge-35 ngayinye. Ngokusho kochwepheshe, izikhwama zikaKylie zingalinganiselwa ku-1 million dollar.
Ukuqoqwa kwezikhwama ezivela kuJenner
Omunye wezikhwama zikaYylie ezizithandayo
U-Kristen Stewart wabhala isihloko mayelana nokusetshenziswa kobuhlakani bokufakelwa kwefilimu
UShia LaBeouf noMia Goth badlala umshado eLas Vegas
Usizo eMpilo kaMark Zuckerberg
U-Devon Murray cishe akazange azibulale
UJennifer Lopez ufuna ukushada, kodwa akethembi umthandi wakhe
UKeith Harrington walahlekelwa intshebe yakhe
UJennifer Garner waqala ukudalwa kokudla kwezingane eziphilayo
Isimangalo sezindaba zaseBrithani: U-Adele wadlala umshado nesoka lakhe!
Amadoda "ashisayo" azoshintsha umbono wakho ngokuguga
Indlela ukuhlobisa ucingo?
I-Cherry Shrimp - Izici Zokunakekelwa Nokuqukethwe
Izingxenye zomzimba womuntu njengempahla yenkolo: izimfihlakalo zezinhlamvu zabangcwele
Amafutha ase-Herring - ama-recipe amahle kakhulu esiphundu esimnandi
UMathewu McConaughey noCamille Alves nabantwana bafika ekugcineni komdlalo wegalufu e-Austin
Iyini i-kitten eyiphupho iphupha?
Inyama yeWundlu - okuhle nokubi
Indlela yokuhlobisa imbiza ngezandla zakho?
Izimfihlo ezingu-15, njengokuthi isithombe sibheke kangcono kunokuphila
Indlela yokudweba i-ballerina?
U-Brooke Shields ngemuva kweminyaka engu-37 waphinda wabhala emkhankasweni wokukhangisa uCalvin Klein